Uyenza njani into yodongwe olwenziweyo | Imisebenzi yezandla
Indlela yokwenza udongwe lwepolymer olwenziwe ekhaya
UIrene Gil | | Imisebenzi yezandla kunye nezixhobo
Amaxesha amaninzi ndifaka iiposti ezinikezelwe udongwe lwepolymer, iyabumba kwaye inokusetyenziselwa ukubala Imisebenzi yezandla. Zombini ukwenza imifanekiso, ukwenza amakhonkco aphambili okanye ubucwebe. Zizinto endizithandayo kwaye kumnandi kakhulu ukusebenza nazo.
Eyona nto ibambekayo lixabiso kuba ayisiyiyo ebiza kakhulu, kodwa ibiza ngokwaneleyo ukuba ungayithengi ukuba asiqinisekanga ngento esiza kuyenza ngayo okanye ukuba siza kuyazi ukuba siyinika njani Sebenzisa kakuhle. Ngeso sizathu, kwiposti yanamhlanje ndilayisha iresiphi yokwenza udongwe olwenziwe ekhaya kwaye ukuze uvavanye kwaye udlale ngezixhobo ngendlela yexabiso eliphantsi
La udongwe lwePolymer, ekwabizwa ngokuba yiFimo, yenye yezona zinto zibalulekileyo kweli hlabathi lobuchule kunye nengcinga. Enkosi ngayo singenza zonke iimilo ezibonakala ezingqondweni zethu nangaphezulu kweziphumo ezintle. Fumana yonke into oyifunayo ngaye!
1 Yintoni udongwe lwePolymer?
2 Izinto zokwenza udongwe lwepolymer
3 Indlela yokwenza udongwe lwepolymer olwenziwe ekhaya
4 Usetyenziswa njani udongwe lwePolymer?
5 Kuphi ukuthenga udongwe lwepolymer?
6 Iimpawu ezaziwayo zodongwe lwepolymer
7 Yezandla ngodongwe lwepolymer
Yintoni udongwe lwePolymer?
Kuba siyivelisile ngemveliso yeenkwenkwezi, ngoku kufuneka sazi kakuhle ukuba sithetha ngantoni. Ipolmer yodongwe ludongwe olubumbekayo. Ngokuqinisekileyo sonke siyalukhumbula udongwe esasilusebenzisa xa sasisebancinci. Ewe iyafana kakhulu nale. Ingasetyenziselwa abancinci nabancinci, kuba kulula kakhulu ukusebenza nayo kwaye ayifuni naluphi na uhlobo lwengxaki.
Umahluko kuphela esinokuwufumana ngokubhekiselele kwiplastikini kukuba olu dongwe lunokudibanisa imibala. Ukuba udibanisa imibala emibini, uya kufumana isiphumo sokuqala semabhile kwaye ukuba usalolula ixesha lokuxubeka, uya kufumana indibaniselwano efanayo.
IINKCUKACHA EZI-3 ZOKWENZA INDAWO YODONGO
Izinto zokwenza udongwe lwepolymer
1 imbiza yeteflon.
1 ikomityi ye iglu yesikolo esimhlophe (Thenga apha).
1 ikomityi ye ingqolowa.
Iipuniwe ezi-2 i-oyile yezimbiwa.
1 icephe le lemon.
Ityhula yomgubo ngemibala eyahlukeneyo. (Thenga apha)
Siza kudibanisa zonke izithako kwimbiza yeTeflon ubeke ubushushu phezu kobushushu obuphantsi. Ukuba sifuna intlama ibenombala, siza kufaka umgubo we tempera wombala oyifunayo kwizithako, kungenjalo, intlama iya kuba mhlophe.
Nje ukuba sibe nezithako kwiimbiza zeTeflon, i siza kuxuba imizuzu elishumi kubushushu obuphantsi ide ihlale intlama. Emva koko, yususe emlilweni kwaye ipholile. Emva koko uyixove ide ibe yinto entle nenokulawulwa. Okokugqibela, ukuyigcina kufuneka uyigcine kwisitya esingena moya.
Kwifoto engasentla ungabona iziqwenga ezenziwe udongwe lwepolymer ukuze nizenze.
Usetyenziswa njani udongwe lwePolymer?
Ngoku ekubeni sisazi ukuba ludongwe olunokubumba, kufuneka sigqibe ulwazi oluchaza ukuba lusetyenziswa okanye luphathwa njani olu dongwe. Okokuqala, kufuneka siyilolonge. Ukwenza oku, uya kucinga ngomzobo kunye ubumbe ngezandla zakho. Ngobushushu bezi zinto, kuya kuba lula kwaye kubelula ukuphatha udongwe. Nje ukuba umzobo wenziwe, kuya kufuneka uye nawo eziko. Ewe uya kuyishiya kwi-oveni yesiqhelo okwemizuzu embalwa. Kwisingxobo ngasinye sodongwe, baya kubonisa ixesha ekufuneka ulishiye ngalo kodwa njengomgaqo jikelele uhlala usondele malunga nemizuzu eli-15, malunga. Xa sisusa ehovini, siyivumela ukuba ipholile kwaye ukusuka apha, ungayisika okanye upeyinte umzobo owenzileyo. Ilula ngoluhlobo!
Kuphi ukuthenga udongwe lwepolymer?
Iindawo zokuqala ekufuneka siye kuzo ube nakho ukuthenga udongwe lwepolymer, ziivenkile zokubhala kunye neevenkile zobugcisa. Kufuneka kuthiwe, nangona iyimveliso eyaziwayo, ayizukubakho kuzo zonke ezi ndawo. Ngamanye amaxesha kunokuba nzima kuthi, kodwa siya kuhlala sinayo i-intanethi. Kukho amaphepha aliqela, nawobugcisa apho unokuzifumana. Kufuneka ujonge ezo zingenazo iindleko ezininzi zokuhambisa kuba asifuni ukuba ixabiso lokugqibela linyuke ngaphezulu kunokuba liyimfuneko.
Uyenza njani amacici odongwe kwiithoni ezimhlophe kunye negolide inyathelo ngenyathelo
Iimpawu ezaziwayo zodongwe lwepolymer
Njengoko besitshilo ekuqaleni, le nto ikwabizwa ngokuba yiFimo. Nangona kufanele kukhunjulwe ukuba iFimo ligama lophawu oluthile lodongwe kwaye ayilogama elenziwe lafana nelo. Ewe, ukuqala kwesi siseko, uyazi ukuba phantsi kweli gama unokufumana udongwe eSpain. Uya kuba neentlobo ezimbini ngaphakathi kwayo:
IFimo Classic: Kunzima ukubumba, kodwa ikomelele ngakumbi.
UFimo uthambile: Ngoku ilungele ukusetyenziswa. Kodwa, ewe, intekenteke ngakumbi kwaye inokuqhekeka ngokulula.
Kwelinye icala, uya kufumana uphawu Sculpey kunye noKato. Ke, awusayi kuphinda ube nezizathu zokuba ukwazi ukusebenza nabo.
Kuyacetyiswa ukuba uqale ngamanani amancinci kwaye alula kodwa ngokuqinisekileyo, kungekudala uza kukhupha umbono wakho kwaye ubone indlela ubugcisa obuvela ngayo kwimizuzwana. Ngaba siza kuqalisa ukusebenza?
Yezandla ngodongwe lwepolymer
Abantu abaninzi bacinga ukuba nge udongwe lwepolymer Unokwenza amanani kuphela, kwaye nangona uyile nto uyifumanayo, olu hlobo lodongwe lubonelela ngamathuba amaninzi.
Ukuba ufuna ukwenza amanani kwaye uyaqala, kunokuba lula kuwe ukuqala ngawo oonodoli abalula kunye neenkcukacha ezimbalwa. Kwi-intanethi uya kufumana "inyathelo ngenyathelo" ekufotweni apho bakufundisa ukumodareyitha icandelo ngalinye lomfanekiso.
Amanye amanani aqhele ukwenziwa alula kwaye anemfashini, kukutya kwesitayile sekawaii. Kuqhelekile ukongeza isitshixo, uwabeke njengamacici, isacholo somqala okanye umhombiso wepensile okanye usiba.
Kwakhona Unokwenza iintyatyambo kunye nezityalo pUkuhombisa. Iziphumo zilungile kakhulu. Zincede ngokusika kunye nezixhobo eziza kukuvumela ukuba wenze ukugqibezela okungcono. Enye inkcukacha, ungasebenzisa i-pastry cutters, kuba i-fondant okanye ii-cookies ziyafana nezo zisetyenziswa ngodongwe.
Uya kubona ukuba xa uziqhelisa nje kancinci, unokwenza neentyatyambo eziyinyani.
Njengoko besele nditshilo, awunyanzelekanga ukuba wenze amanani kuphela, Ukuhonjiswa kwesikhepheEnye indlela elungileyo. Unamawaka emibono eya kukukhuthaza ukuba uyihombise kwaye uphinde uyisebenzise ezo zijeke zeglasi uzisebenzisa yonke imihla. Kwakhona, ukuba usebenzisa udongwe lokubhaka lwe-polymeric, awuyi kuba nangxaki ukubeka lonke iqhekeza ehovini, iglasi iya kubamba ngokugqibeleleyo. Lumka, ungasebenzisi iinkonkxa zeplastiki kule meko umsebenzi wakho uza kuphela kakubi.
Ukongeza kuyo yonke le nto, kukho indlela eyaziwayo eyandayo yokuhombisa kwihlabathi lodongwe lwepolymer olubizwa ngokuba yi "millefiori" okanye ngesiSpanish "amawaka eentyatyambo". Ihlala ngaphakathi ngokudibanisa iziqwenga zodongwe lwepolymer kunye ukwenza ityhubhu loo nto isikwe ibe ngamacwecwe kwaye ibonise umzobo owenzileyo, nokuba ungabonakaliswa okanye ube nomfanekiso othile. Ekuqaleni, iintyatyambo zadalwa, kodwa zavela kwaye ngoku unokufumana yonke into.
Ndiyathemba ukuba uyifumana iluncedo kwaye kude kube lixesha elizayo DIY.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla kunye nezixhobo » Indlela yokwenza udongwe lwepolymer olwenziwe ekhaya
Inqaku elilunge kakhulu, enkosi ngokwabelana ngalo, ubungazi ngale ndlela yokuba ukwazi ukwenza udongwe lwe-polymer ngokwakho, ngoku lixesha lokuba uyenze.
Molo, uxolele umbuzo yintoni i-powder tempera? Ndihlala eMexico kwaye andiqinisekanga ukuba ndikuqonde kakuhle, ukuba xa usithi itempera uthetha ipeyinti yomgubo kwaye ukuba kunjalo, ingaba yimifuno okanye kanjani?
Molo, bendifuna ukwazi ukuba ungayifaka enye ioyile yamaminerali ngeoyile eqhelekileyo okanye enye ioyile?
Molweni, imibuzo emibini
1. Yintoni ubushushu bomgubo? Ngaba zii-anilines? Endiyisebenzisela i-porcelain ebandayo kwaye iphantse ibe zizithako ezifanayo
2. Ingaba i-oveni inyanzelekile kwaye / okanye iyasebenza imicrowave?
Isikali seBianca sitsho
Musa ukuthi olu dongwe lwepolymer, wenza isincamathelisi esenziwe ekhaya, ipasta ebandayo okanye i-porcelain yaseFrance, musa ukwenza abantu bawele kwimpazamo, udongwe lwepolymer alunakwenziwa ekhitshini kuba kuthatha iinkqubo ezintsonkothileyo zemichiza ekubekeni phambili
Nceda ulungise iposti yakho, ayilo dongwe le-polymer, olu luhlobo lwe-porcelain eyenziwe ekhaya. Udongwe lwePolymer lufuna iinkqubo ezintsonkothileyo zamachiza, njengoko igama lisitsho, yiplastikhi okanye iplastiki yeplastiki efuna ilabhoratri epheleleyo nexhotyisiweyo ukuyenza. Musa ukudida abantu, ndingumzekelo wodongwe lwepolymer kwaye oku akunanto ngaphandle kwezinto endisebenza nazo.
Into oyithethayo ayilulo udongwe lwepolymer.
IPolymeric sisincamathelisi esisekwe kwi-PVC, ipolymer yeplastikhi eyenziwe ngeemolekyuli ezininzi (ii-monomers) ze-vinyl chloride. Inkqubo ye-vinyl chloride polymerization inetyhefu kakhulu kwaye yenzeka kwimizi-mveliso kwii-reactor ezitywinwe ngophatho.
Molo, molo emva kwemini ,, i-oveni inyanzelekile kolu hlobo lobugcisa? ,, enkosi kakhulu kwangaphambili !!!
Ndiyavuma, ayilo dongwe le-polymer, kuyabanda i-porcelain eyenziwe ekhaya. Nokuba iphilisiwe kangakanani e-ontini, mayiyekwe yomile, ukuba isiqwenga sibhaptiziwe emanzini, siphela sinyibilika, esingenzeki ngodongwe lwepolymer lokwenyani, olunokuba semanzini ngaphandle kwengxaki, kuba luhlala ngathi Into ye-PVC
Kulungile kwezinye izinto zobugcisa, kwaye akubizi ukusebenza nabantwana. Kodwa ayomelele ngexesha
UBellanira Melendez sitsho
Ndiyabulela kakhulu, ukusetyenziswa kwale mveliso kundicacisile kakhulu. Kwilizwe lam asikabinayo le mveliso, enkosi ndihlala ePanama, inyani andazi ukuba bayayithengisa, ndisebenze kunye ne-porcelain ebandayo. Enkosi
Inqaku lilungile, siyalukhumbula udongwe lwePolymer ngePVA, i-polyvinyl alchohol engumoya owomisa udongwe lwepolymer, kwaye sicebisa udongwe lwaseKorea kuba zikumgangatho olungileyo.
Ndicinga ukuba unombono omnandi xa uxelele indlela yokwenza udongwe olufanayo ekhaya kunye neekhemikhali ezingenabungozi kwaye eziqulathe iipolymers yiglue.
Phendula ku www.lacasadelaarcilla.es
Molo! Ndiyifunde ngononophelo iposti yakho, khange uyicacise ukuba ibhakwe kangakanani. Enkosi Imibuliso evela eArgentina
Uyenza njani umnini wekhandlela ngokurisayikilisha kwakhona itoti yetyhuna.
DIY indlela yokwenza incwadana yamaphepha entwasahlobo kwiphepha.